Urban Executive Suite – Amanyathelo okuya eLake
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAmmar
Le ndawo iqaqambileyo, efudumeleyo neyodwa ihleli ngokuyinxenye phezu komhlaba, ineefestile ezinkulu kakhulu ezijonge emazantsi, zixhotyiswe ngezivalo zaseCalifornia ukuze zilungelelanise, indawo ebiyelweyo yabucala ebiyelwe ngasemva elungele i-BBQing, isango lokungena labucala lokungena, kunye ne-1 yasimahla. indawo yokupaka ifakiwe. Kwakhona ibhedi yobukhulu bokumkanikazi, ikhitshi eligcweleyo lokutyela kubandakanya i-dishwasher kunye negranite yangoku kunye nebhafu yeporcelain. Indawo egqibeleleyo yohambo olufutshane ukuya eToronto, kwingingqi yewayini yaseNiagara, kunye neNiagara Falls.
Umgangatho ongaphantsi komhlaba ophakamileyo (inxalenye ngaphezu komhlaba) uneefestile ezinkulu ezivumela ukukhanya kwendalo okuninzi okunokulungiswa kusetyenziswa izivalo zaseCalifornia. Le yunithi ikumgama omfutshane wokuhamba echibini kwaye iza nendawo ebiyelwe yabucala kwindawo engasemva kwendlu elungele i-BBQing, inomnyango wabucala wokungena owahlukileyo, kunye nendawo yokupaka yasimahla e-1 ibandakanyiwe. Ikhitshi liza liphelele kunye nefriji yesimbo se-Euro kunye nomatshini wokuhlamba izitya kunye nesiqithi esinesiqithi samanzi segranite (izihlalo ezi-2). Kwakhona, indawo yokuhlambela esanda kulungiswa emi-3 yiporcelain kunye negranite kuyo yonke into enamatye amampunge adadayo kunye nokuphuma kwishawari.
Amanyathelo ukuya echibini kuluntu oluqolileyo lwedolophu ebekwe kumda weLake Ontario, ngaphakathi kweGTA. Ukufuna umntu oqolileyo, ochwephesha kwezoshishino - le yunithi ayifanelekanga kwiintsapho, abatshayayo, okanye izilwanyana zasekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Ammar
Ifumaneka ngokuthumela umyalezo nge-app. Kwimeko yemicimbi engxamisekileyo kunye nongxamiseko, nceda unditsalele umnxeba ngokuthe ngqo kwi-647.224.2227
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Burlington